ह्याङ्गओभर हटाउने ११ उपायहरू!! - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / पढ्दा पड्दै / ह्याङ्गओभर हटाउने ११ उपायहरू!!
खबरडेस्क, २९ चैत । जन्मदिनको अवसरमा होस् या अफिसमा पदको बढुवा होस्, विवाहको उत्सव मनाउन होस् या परीक्षामा पास भएको अवसरमा, रातिको बेला अलिअलि वा धेरै नै मात्रामा मध्यपान गर्नु प्रौढ मानिसहरूको स्वभाव नै हो। खाउन्जेल रमाइलो लाग्ने, सबै कुरामा मज्जा आउने यो रक्सीको मातले बिहानीपख भने साह्रै नै हैरान गराउँछ। वान्ता हुने, टाउको दुख्ने, खान मन नलाग्ने, चिन्ता लाग्ने, कुनै कुराको याद नहुनु अनि बेलुका पिएकोमा आफूलाई दोषी महशुस गर्नु ह्याङ्गओभरको मूख्य सङ्केत हो, तर यो कुरा भनिराख्नु जरुरी पनि छैन।